04/01/2018 - Page 2 sur 3 -
Fanaovana herisetra mamoafady : Zaza 8 taona naolan’ny rainy
Raim-pianakaviana iray manodidina ny 47taona indray no voalaza fa nanolana ny zanany izay miaro fanodinkodinana zaza tsy ampy taona teny Anosy. Zaza valo taona monja no lasibatra tamin’izany, fanararaotana nataon’ny rainy izany. Fantatra tamin’izany fa …Tohiny
Raharaham-pirenena : Ho taonan’ny fanehoana ireo asan’ny governemanta ny taona 2018
« Taona vaovao, lafim-piaraha-miasa vaovao », io no teny nentin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta,Olivier Solonandrasana Mahafaly, mamaritra ny fitsipika entin’ny govrenemanta miasa amin’ity taona 2018 ity, nandritra ny filankevitry ny governemanta omaly. Fitsipika hiatrehana ny taona …Tohiny
Governemanta : Niarahaba manokana ny praiminisitra mivady
Noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2018, dia tonga niarahaba sy nitsidika ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier mivady ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta, omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Mahazoarivo. Nandritra izany no nanatanterahana tamin’ny fomba sy …Tohiny
CRAM : Amin’ny Mey 2018 ny fitsapan-kevi-bahoaka
Mbola mandeha ny adihevitra mikasika ny fanitsiana ny lalàm-panorenana amin’ izao fotoana izao, ary maro ihany koa ny fanehoan-kevitra mifandraika amin izany. Anisan’ny nanambara ny tokony hisian’ny fikitihana ny lalàm-panorenana izao ny avy amin’ny MFM, …Tohiny
Tsy mitombina ny filazan’ireo depiote miisa 73 fa tsy manaiky ny fanelanelanana ataon’ny vondrona iraisam-prenena izy ireo amin’izao hetsika ataony izao. Fantatra mantsy fa mandray anjara mavitrika amin’izany fanelanelanana izany izy ireo. Norbert Lala Ratsirahonana ...Tohiny